Migrationsverket oo go'an kasoo saaray Waalidka loo keenayo Caruurtooda ee ka qaan gaartay
HomeWararka Maanta SomaliskaMigrationsverket oo go’an kasoo saaray Waalidka loo keenayo Caruurtooda ee ka qaan gaartay
October 30, 2020 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 1
Hey’ada Socdaalka Dalka Sweden ayaa maanta shaacisay in dib u eegis ku sameeneyso waalidka loo keenayo caruurtooda kuwaasi oo ku sugan Dalka dibadiisa.
go’anka ayaa ah in Caruurta doonaya in ay la midoobaan waalidkooda la eegidoona da’da ay jireen Xiliga loo bilaabay dacwada uu ku imaanayo wadanka sweden.
Hey’ada Socdaalka ee Migrationsverket ayaa maanta sharcigeeda waxa uu dhigayaa in la qiimeeyo da’da uu qofka jiro marka go’anka laga gaaro.
tusaale ahaan hadii uu qofka jiray 15 sano marka dacwada loo furay oo go’an laga gaaro isagoo jira 18 sano jir go’ankaasi oo ah in wadanka la keeno uma suura galeyso qofkaasi in uu dalka yimaado sababta oo ah madama uu qaan gaaray.
Dad badan oo ajaanib ah gaar ahaan Somali ayaa sharcigan uu sameyn ku yeeshay madama waalid badan caruurtooda laga reebay kadib marka uu qaan gaaro qofka curadka ee kamid ah caruurtooda.
Sharcigan maahan mid kasoo baxay Sweden waxa uu ya yimid Barlamaanka Midowga yurub lakin waa ku qasab in Dowlada sweden ay qaadato madama ay xubin ka tahay wadamada ED.
Sharciga ayaa sidoo kale waxa uu caawinayaan Dadka kale ee ku nool wadamada Yurub ee qeybta ka ah Midowga yurub oo doonaya in Caruurtooda loo keeno halkan.
Asc setihin bahad somaliks Waxan ku weydina hadi qofk asigo jiro 16 san logu xarey hadi waqtig ku dhaco asigo jiro 18 sano mala kenayo sid ana filay hadi qofka xanunsan yahay xita hadi jiis yahay wa sid uqangaray sida ana hadalkad ufahmay mise xanun kisa lagu qimeynan shegin warqad dalbashad dadk lasocoda kamit yahay bro ikale cadey